Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny fijoroana tena tsara indrindra fantatra amin'ny WTM 2021
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny fijoroana tena tsara indrindra fantatra amin'ny WTM 2021.
Nambara ny fijoroana ara-javakanto, marani-tsaina ary manaitra indrindra ao amin'ny WTM London, ka anisan'ireo mpandresy ireo toerana toa ny Nosy Canary, Irlandy ary Arabia Saodita.
Mpitsara tsy miankina manam-pahaizana efatra no nanambara ny mpandresy tamin'ny WTM London 2021 Best Stand Awards tamin'ny alarobia 3 Novambra.
Ny mpitsara dia i Paul Richer, mpiara-miasa ambony ao amin'ny Genesys Digital Transformation; Kim Thomson, Talen'ny Famoahana ao amin'ny Travel & Tourism News Middle East (TTN); Bill Richards, mpiara-miombon'antoka zokiolona ao amin'ny Fikarohana momba ny fizahantany sy ny varotra (TRAM); ary Martin Fullard, Talen'ny Editorial ao amin'ny Mash Media.
Ny sokajy fahenina – ny Safidim-bahoaka – dia hofidian'ireo solontena WTM amin'ny alalan'ny Facebook sy LinKedin.
Ny kanto indrindra, marani-tsaina ary manaitra indrindra dia mijoro amin'ny WTM London efa nambara, ka anisan'ireo mpandresy ireo toerana toa ny Nosy Canary, Irlandy ary Arabia Saodita.
Ny Nosy Canary (EU600) no mpandresy tamin'ny Best Stand Design, izay nankasitrahana noho ny “fampifangaroana mety amin'ny teknolojia sy ny olona”.
Noderain'ny mpitsara ny fandrafetana onjam-pahazavana eo amin'ny valindrihana amin'ny fijoroana sy ny faribolana LED eo amin'ny gorodona, nanamarika ny toerana fivoriana.
"Tsara ho an'ny fifampiraharahana ny écran touchy ary nandeha tsara," hoy ireo mpitsara.
Barbados Tourism Marketing (CA220) noderaina fatratra tamin'ny “fampiasany tsara ny loko izay nanome fahatsapana ho an'ny firenena”, hoy ihany ny mpitsara.
Tourisme Irlandy (UKI200) nahazo ny loka ho an'ny Fijoroana tsara indrindra amin'ny fanaovana raharaham-barotra, araka ny filazan'ny mpitsara dia naneho ny toerana haleha "tsara tarehy" izy io ary namorona "rivotra B2B be atao".
“Mora ny nivezivezy ary nisy marika tsara ny latabatra. Tena nahatonga anao hahatsapa fa tany Dublin ilay faritra misy vato be vato”, hoy ireo mpitsara. “Nomanina tsara ny layout.”
Variety Cruises (TP101) no mpandresy tamin'ny Best New Stand voninahitra, noho ny modely amin'ny sambo, fampiasana tsara ny habaka ary horonan-tsary mampiseho mazava tsara ny vokatra.
“Nanararaotra tanteraka ny toerana tsara izy io ary ny fiolahana malefaka izay nanasa anao ho eo amin’ny fijoroana”, hoy ireo mpitsara.
The Endri-javatra mijoro tsara indrindra nandresy tamin'ny Saodiana Tourism Authority (ME550 – ME450 – ME400).
Hoy ny Mpitsara: “Lalana miolikolika no mitondra anao amin’ny dia mandritra ny fotoana. Toy ny fandehanana amin'ny tantara nanomboka tamin'ny andron'ny Bedouin ka hatramin'ny vanim-potoana maoderina kokoa izay maneho ny fahitan'izy ireo ny taona 2030.
"Fijoroana nisy fiantraikany tamin'ny endri-javatra manintona izay nandrisika ny mpitsidika."
Manampahaizana manokana momba ny fandoavam-bola amin'ny Internet Ecommpay (TT300) nandresy ny Design Stand tsara indrindra at Mandrosoa - ny fampirantiana teknolojia fitsangatsanganana izay iarahana amin'ny WTM London.
Ny didim-pitsarana navoakan'ny mpitsara dia "nafana sy nahafinaritra" ilay toerana, noho ny ampahany tamin'ny bar sy ny voninkazo.
"Ny rafitra metaly dia zava-baovao ary tena mazava sy mora azo tsara ny zavatra ataon'izy ireo", hoy ny fanehoan-kevitry ny mpitsara.